Kitra – “Major league soccer”: tafita amin’ny ampahefa-dalana ny ekipan’i Metanire | NewsMada
Tafakatra amin’ny dingana ampahefa-dalana hiadiana ny fifaninanam-pirenena amerikanina « Major league soccer » (MLS), taranja baolina kitra, ny Minnesota United Football, misy ilay vodilaharana malagasy, i Romain Metanire. Resiny teo amin’ny fiihodinana faharoa ny Columbus Crew, tamin’ny alalan’ny «tirs au but», 5 no ho 3, rehefa nisaraka ady sahala 1 sy 1 tao anatin’ny fe-potoana ara-dalàna. Fihaonana notanterahina tao amin’ny kianja ESPN Wide world of sports complex. Niady ny fihaonana teo amin’ny roa tonta. Nanantombo teo amin’ny fanafihana sy ny fitazomam-baolina ry zareo Columbus, mpampiantrano. Marihina fa tao anatin’ireo 11 nijoro voalohany i Metanire, saingy tsy nilalao hatramin’ny farany izy fa nosoloin’i Marion Hairston, teo amin’ny minitra faha-72, noho ny ratra nahazo azy.
Nitarika anisa ny Minnesota United
Nampiditra ny baolina voalohany ny Minnesota United, tamin’ny alalan’i Robin Lod, teo amin’ny minitra faha-18. Tsy nisy intsony ny baolina maty taorian’izay fa io isa 1 no ho 0 io ny nentin’ny roa tonta niala sasatra. Niezaka nanindry avy eo ny Columbus. Nanasahala ny isa izy ireo, tany amin’ny minitra faha-79, rehefa nahazo “penalty” nodakan’i Zardes.
Nahafaty ny baolina nodakany avokoa ireo dimy lahy ho an’ny Minnesota United, raha efatra ihany ny an’ny Columbus, teo amin’ny «tirs au but». Hidona amin’ny SJ Earthquakes, izay nandresy ny Real Salt Lake, tamin’ny isa 5 no ho 2, ny Minnesota United, eo amin’ny ampahefa-dalana. Lalao hotontosaina ny alahady ho avy izao.